Nhau - Basa rekutakura kwesimbi
1. Kuiswa kwesimbi kunozivikanwa nevatengi nekuda kwekushanduka kwayo uye kuita kwakawanda. Kuiswa kwesimbi kunoonekwa kwese kwese muhupenyu hwemazuva ano hwezuva nezuva. Kuvandudzwa kwayo kwakasimba uye zvakasarudzika maficha akanyorwa pazasi zvinoita kuti ive yakanaka kurongedza mhinduro yezana ramakumi maviri nemasere:
Zvakanakira simbi kavha:
* Chengetedza chigadzirwa kwenguva yakareba; mune yakavharika mamiriro, chikafu chinogona kuchengetedzwa zvakakwana kubva panguva chavharwa.
* Dzivirira chigadzirwa chemarara
* Chengetedza zvirimwa zvakaputirwa; wedzera hupenyu hwesherufu yezvakagadzirwa zvigadzirwa
* Iva nechokwadi chekudzivirirwa kubva kuchiedza, oxygen uye mabhakitiriya
* Chigadzirwa chinoramba chiri chitsva kusvikira gaba ravhurwa; iyo simbi kurongedza neakawedzera pasherefu hupenyu kunogona kudzivirira mwenje, oxygen uye mabhakitiriya; iyo inogona kuona kuti chigadzirwa chinoramba chiri chitsva.
* Simbi dzinoramba dziine mukana mukuru wekuvandudza nekuvandudza. Mhando yekushandisa haina muganho, kubva kurongedza kumuromo-kudiridza macandi, mavhidhiyo ane microwaveable kune maaerosols uye nezvimwe. Simbi kurongedza kuri kuramba kuchivandudza nekuvandudza kusangana nezvinodiwa zvevatengi nevatengi.
Nhasi, simbi yanga ichishandiswa mune dzakasiyana zvigadzirwa uye kurongedza mhinduro, asi vagadziri vanoramba vachitsvaga mikana mitsva yekukwezva vatengi. Mabhokisi esimbi ane akasiyana maumbirwo, hukuru uye zvishongedzo, izvo zvinogona kushandiswa kune:
Kudya, zvinwiwa, zvinhu zveumbozha, zvigadzirwa zvemunhu, zvinodikanwa zvemumba zuva nezuva.
2. Zviri nyore
Kugadzikana ichiri huru yekutyaira kusimudzira kwevatengi yakarongedzwa zvinhu kurongedza. Shanduko mumamiriro emhuri, anoshanduka maawa ekushanda uye nguva yekuenda kwaunza shanduko mukushandisa mashandisiro. Kuteedzera mhuri kuri kuita kudiki uye kudiki, mararamiro ari kuwedzera kubatikana, uye indasitiri yekurongedza iri kuramba ichichinja kuzadzisa izvi zvinogara zvichichinja zvido.
Iyo simbi yekuisa ine yakanyanya kuomarara, iyo inovandudza chigadzirwa chengetedzo. Izvo zvinodzivirira zvivakwa zvinogona kuchengetedza mhando yakanaka uye kupinda kwezvisina kuchena, nokudaro nekuona kuti zvirimo zvinosvika kune vatengi zvakachengeteka zvisina kusvibiswa.
Simbi yekupakata inosangana nezvinodiwa nevatengi vatsva kuburikidza nyore-kuvhurika, inogadziriswazve kurongedza uye zvinokwanisika zvikamu zvinobvumira vatengi kuvhura chete zvavanoda. Dhizaini yesimbi inogona iyo inogona kushandiswa muovheni ye microwave inowedzera iko nyore kwesimbi yekupakata kwechikafu chakareruka.
Chikafu chakakamakwa chinogona kudyiwa zvakachengeteka kwemakore mazhinji uye chakanakira kudya nhasi kana kwekukurumidzira mangwana. Iyo tangi haidi kuti ive firiji kana chando. Ivo vanopa yakazara kudzivirirwa kubva pachiedza neoksijeni, uye yakavharwa. Vanogona zvakare kuchengetedza chikafu kudzivirira zvinovaka muviri kupinda mukati. Icho chigadzirwa chinodzivirirwawo kubva kuhunyoro, guruva, makonzo uye zvimwe zvinosvibisa.
3. Iko kurongedza kwakanyanya
Embossing uye embossing tekinoroji inogonesa vanogona vagadziri kuburitsa hunyanzvi magadzirirwo. Embossing inzira inogadzira zvishongedzo kana zvidhori zvine makwikwi akasimudzwa (kubva mukati kuenda kunze), nepo de-protrusions inogadzira zvishongedzo nemakonati emakonati (kubva mukati kuenda kunze). Iko mukana weiyo convex uye concave zvikamu ndezvekuti zviripo zvekunze zviyero zvinogona kuchengetedzwa, saka hapana chikonzero chekuchinja chekufambisa uye pallet nzvimbo. Iyo yaimbove simbi yakanyoreswa nemifananidzo yakadhindwa kuti ikwirise zvinoonekwa uye zvinogunzva mhedzisiro. Mifananidzo uye mifananidzo, brand LOGO, yambiro yekuzivisa uye mabasa ekuziva mabhenji zvese zvinogona kukwidziridzwa.
Mazuva ano, pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza yakadzika midzi mumoyo yevanhu, uye kuiswa kwesimbi kunogona kudzokororwa kunofarirwa nevatengi; simbi kurongedza inogona kudzokororwa 100% nekusingaperi pasina kurasikirwa nehunhu hwayo hunhu. Icho chinhu chinowanikwa zvachose, chakashandiswazve pasi rese, uye chimwe chezvinhu zvekurongedza zvine mwero wepamusoro wekushandisa zvakare. Simbi nealuminium ndezvimwe zviwanikwa zvakawandisa pasi rose, kunyangwe zvinhu zvakadzokororwa zvinoderedza zvakanyanya kukanganisa kwenzvimbo kwekugadzirisa.
Pakati pezvinhu zvikuru zvekukwikwidza kuputira zvinhu, simbi ine yakanyanya kudzoreredza mwero uye chiyero chekudzoreredza, uye yanga ichiwedzera gore rimwe nerimwe: - Muna 2019, chiyero chekudzoresa chemakani esimbi uye aruminiyamu chinwiwa chemakani chaive 80% uye 75% zvichiteerana; kudzokorodza yakaderedza kushandiswa kwesimba uye A yakawanda kabhoni dhayokisaidhi inoburitswa.
Simbi Yekuchengetedza Basket Iine Lid, Bhokisi ReTini, Tin Bhokisi Rekutakura, Cd Kuchengetera Kesi, Mhete Inodhonza Inogona Kuvhura Claw, Yakasarudzika Tin Bhokisi,